गृहमन्त्रीज्यु, अब जनताले आफ्ना छोरीको सुरक्षा आफैँ गर्नुपर्ने हो ? ‘पत्ता लागिसकेको’ ह*त्यारा कहिले सार्वजनिक हुन्छ ? – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /Banner news/गृहमन्त्रीज्यु, अब जनताले आफ्ना छोरीको सुरक्षा आफैँ गर्नुपर्ने हो ? ‘पत्ता लागिसकेको’ ह*त्यारा कहिले सार्वजनिक हुन्छ ?
काठमाडौँ । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बला*त्कार पछि ह*त्या भएको १ वर्ष पुगेको छ। यो एक वर्ष राष्ट्रिय लज्जाको एक वर्ष पनि हो। सम्भवतः टेलि भिजन कार्यक्रमहरु मध्ये यस विषयमा सबैभन्दा बढी रिपोर्टिङ गर्ने कार्यक्रम र त्यसको सञ्चालकका हैसियतले यस विषयमा टुंगो लाग्ने गरी खोजमुलक सामग्री प्रस्तुत गर्न र अप*राधी पत्ता लगाउन प्रभावकारी भूमिका निभाउन नसकेकोमा म निर्मला पन्तको परिवारजन तथा आम दर्शकहरुसँग क्षमा याचना गर्दछु ।
त्यसपछि यो देशका गृहमन्त्रीले हत्यारा पत्ता लागिसक्यो चाँडै सार्वजनिक हुन्छ भनेका छन् । १ वर्ष पनि चाँडै होइन भने गृहमन्त्री ज्यु, तपाईंको परिभाषामा चाँडै भनेको के हो? स्पष्ट पारिदिनुहोला र हिजो मात्र पनि तपाईले आफ्नो अभिव्यक्ति मार्फत अर्को आश्चर्य जनक कुरा भन्नुभयो । निर्मला पन्तको जस्तो बला*त्कारको घटना हिजो पनि हुन्थ्यो, आज पनि छ, भोलि पनि केही समयसम्म रहन्छ ।
यस किसिमका अप*राध पुर्णतया निषेध गर्न सकिँदैन । गृह मन्त्री ज्यु, के अब जनताले आफ्ना छोरी चेलीको सुरक्षा आँफैले गर्नुपर्ने हो? युद्धकालमा यस्ता गतिविधि, कृयाकलाप गर्नेलाई यस्तै भन्नुहुन्थ्यो तपाई? सत्ताको मात यति धेरै यति जाँडै चढ्न कसरी सक्यो । यो चाहिँ पत्ता लगाउन जरुरी देखियो । हचुवाको भरमा अपराधी पत्ता लाग्यो भन्नु र यस्तो घटना भैरहन्छ भन्नु गलत हो ।
कमसेकम यति चाहिँ स्वीकार गरिदिनुहोला कुनै मञ्चबाट । तात्पर्य त्यो होइन तर बोल्दा मिलाउन नसकिएको मात्र हो भने कुरा सकियो । देशका उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले त पत्ता लागि नै सक्यो सार्वजनिक गर्छाैँ, बरु मेरो दलको भनेर छाता ओढा उन नआउनुहोला भनेर भन्नुभयो । माननीय मन्त्री ज्युलाई आँफुले बोलेको कुराको स्मरण छ कि पार्टीको स्कुल विभागकै रनाहामा हुनुहुन्छ, कसैले सोधिदिनु होला ।
एउटा कुरा स्पष्ट पाराँै कि– नेपालमा भएका आजसम्मका बला*त्कारका घटनामा समातिएका दोषीहरुमध्ये एकजनालाई पनि डिएनए मिलेको आधारमा समातिएको होइन । त्यसकारण डिएनए नमिले पनि अन्य मानवीय अनुसन्धानको आधारमा दोषीलाई केरकार गर्न मिल्छ । डिएनए मिल्नका लागि हाम्रो ल्याब १०० प्रतिशत विश्वसनीय छ त ? विज्ञहरु भन्छन् छैन ।
निर्मलाको डिएनए स्याम्पल अब संक्रमित भैसकेकाले यो दुनियाँको कुनै ठाँउको विज्ञले पनि डिएनए मिलाएर अपा*रधी समाउन सक्दैन । अनुसन्धान गर्न पछि गठित आयोग हरुले निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाउने भन्दा केके गल्ती भए भन्ने पत्ता लगाएर रिपोर्ट तयार पारे । नेपाल प्रहरीले स्पष्टसँग भन्नु पर्छ– कि डिएनए परिक्षण गलत छ कित ल्याव गलत छ, कि स्याम्पल नै सं*क्रमित, कन्ट्यामिनेटड छ ।
ललितपुरको गोदामचौर बला*त्कार काण्डमा आरोपीतको डिएनए मिलेन तर पनि जिल्ला अदालतले अन्य प्रमाणका आधारमा सजाय सुनायो। कित ल्याब कि त डिएनए स्याम्पल ठिक छैन भनेर भन्न प्रहरीले नसक्दा यो केश कहिल्यै नसुल्झिने रहस्य बन्दै छ । मानव अधिकार संगठनका अध्यक्षको स्थलगत प्रतिवेदनमा बबिता बम ओपेरा होटलको डान्सबारमा डान्सरको रुपमा काम गर्छिन् भनेर समेत उल्लेख थियो ।
घटनालाई तोडमोड गर्न सघाउने सबैलाई एकै ठाँउमा उभ्याउन सक्ने क्षमता सरकारले राख्दैन किनकि निर्मलालाई न्याय दिन भन्दा जरुरी सम्भावित आन्दोलन रोक्नु छ, हामीजस्ता संचारकर्मीबाट जोगिनु छ। यति धेरै कोणबाट प्रभावित प्रहरी प्रसासनले तत्थ्य बाहिर ल्याउने हिम्मत के राख्थ्यो । मानवअधिकारवादी, राजनीतिज्ञ, पत्रकार, स्थानीय बुद्धीजिवी, सबलाई खुशी पार्न खोज्दा र सबलाई न्याय भाग लगाउँदा निर्मला र उनको परिवारको भागमा न्याय नै परेन ।
मरिसकेकी निर्मलालाई न्याय दिनुभन्दा बाँकी सबैको मन राखिदिन जरुरी देखियो सायद । फेरि पनि भन्छु यो केशलाई अल्म ल्याउन हाम्रा रिर्पोटहरुले पनि प्रभाव पारे भने हामीलाई माफ मात्रै होइन सजाय नै दिनुपर्छ र शुरुवात हामीबाटै होस् । गतवर्ष स्टुडियोमा टाँसिएको यो पोष्टर सुरक्षित राखिएको थियो । मनमा शंका थियो कि निर्मलाले सजिलै न्याय पाउन के सक्थिन् ।
आजको कार्यक्रममा यो केशको केही गहन विषय उठाउने प्रयास गर्ने छाँै । आजको कार्यक्रममा फेरी यो पोष्टर टाँस्न बाध्य भएको छु तर प्रधान मन्त्रीले हत्यारा बलात्कारी पत्ता लगाउन १२ वर्ष पनि लाग्न सक्छ भन्नुभएकाले सोच्दैछु– यो पोष्टर १२ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ला कि ? तपाई सोच्दै गर्नुहोस् म टाँस्नतिर लाग्छु ।